LALISAAN EENYUU? – Beekan Guluma Erena
LALISAAN EENYUU?	Beekan Guluma Erena
Uncategorized April 10, 2016June 16, 2016	3 Comments
123SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
LALISAA INDIRIS Eenyu?
Garuu maal godhuree “bara milkaayinaa danqaatu sagaltama” jedhu mitiiree kitaabni Lalisaa utuu gabaarra hin oolin suuraa qola kitaabasaa miisiyaa hawwaasummaa facbookirratti arguun bulchitoonni aanaasaati akkanni hin baranneef dorsisa cimaa isaaf haadhasaarratti geggeessu eegalan. Yeros Lalisaan waan malatu wallaalee tabjaajjahu eegale. Dorsisnis kan duraa caalamaa itti dabalaa dhufnaan barsiisonni isa jaallatan qophaatti isa waamuun “yoo as jiraatte si ajjeesu kanaaf amma warqaa geggeessaa dhoksinee siif baafnaati asi deemii iddoo biraatti baradhu” jechuun gorsan. Innis yaada kana harmeesaa mariisisee waraqaa sana fudhachuun ollaa magaalaasaanii kan taate mana barumsaa Adiveentistii Dongoroo tti jijjirratee ademe. Erga achi ga’ee haala hunda xumuruun barnoota itti fufee guyyaa 2 barateen booda kitaabnisaas gara Oromiyaa lixaatti raabsamtee gurguramuu eegalte. Bulchitoonni biyya Xoophiyaa sadarkaa gandaarraa kaasee amma sadarkaa olaanaatti wa’een guddina Afaan oromoo yeroo ka’u mata dhukkubbiitu itti ka’a.Yeroo sirbi ykn kitaabni afaan Oromoo tokko maxxanfamu faayidaafi waangaarii isaarra taruun gurrasaanii qeensanii waan mootummaa qeequufi gocha hamaasaanii ifatti mullisuu sakkatahuun barreessaa ykn weellisaa sana adamsanii akka waan dhaloota qubee hunda hidhaniitti yaaduun mana hidhaatti isa darbatu. Yoo fedhanis barnootarra isa harihuu. Lalisaas gochuma kanatu irratti raawwate. Mana barumsaa inni itti jijjirate hordofuun xalayaa Lalisaan shororkeessaadha waan ta’eef yoo badiin geggeefame mana barumsichaatu itti gaafatama’ jedhu waajjira dhaabaa DHDUOrraa mana barumsaa inni itti barachaa jirutti ergame. Manni barumsaa Adiveentistii Dongoroos yeroo sanaa eegalee akka Lalisaan mooraa sana gad lakkisuuf dirqisiise. Lalisaanis imimmaamsaa lolaasaa moorichaa ba’ee fuulasaa gara biyya dhalootasaatti naannefate. Yeroo Innaanggoo ga’us hidhamuuf humna tikaan barbaadamaa akka jiru baree lubbuusaa olfachuuf sababa afaan Oromoon kitaaba barreesse qofaaf adamoo jaroota kanaa baqatee gara finfinneetti barnoota addaan kutee baduuf dirqame. Erga finfinnee ga’ees biyyaa afaaniif nama beeku hin qabne keesaatti rakkoo heedduu dhamdhamachaa qarshii kitaabumasaa gurguratee argatuun ciniinatee jiraachuu itti fufe. Bara namatti jige bishaantu muka namatti yaaba jedha Oromoon. Lalisaa rakkoosaa kana ilaalees rakkinni garaa hin laafneef kitaabasaa ija 200 utuu ambootti erguu karaarratti humna tikaan jalaa saamame. Maal kana qofaree konkolaataa awutoobisii guddaa bara 2007 finfinneetii gara Dambi Doollootti utuu imaluu Jaajjiifi Geedoo gidduutti galagaluun lubbuu nama heedduu galaafate sana keessattis kitaabonnisaa jalaa babbadaniiru.Akkuma akkasaatti jireenya hadha’aa dhamdhamaa turtii finfinnee keessa jiraachuu itti fufe. Al tokko tokko darbee darbee hayyucha dhaloota qubee Beekan Gulumnaa bira dhaquun bira tutture gorsaafi jajjabina hayyuu kanarraa dhagahuun amileesaa xuqatee akka deddeebi’aa ture afaansaan ni hima. Kitaabni Lalisaan maxxansiise sun”DHIDHIIBBAACABA DABALE” jaallatamummaa guddaa argachuun turtii ji’a 2 gidduutti gabaarra dhumnaan abbaa qabeenyaa mana maxxansaa Raajii dargaggoo Rooberaa Hinsaramuu ammas qarshii muraasa akka eeggatuuf abdachiisee kitaaba sana akka Lalisaan irra deebihuun maxxansuuf jajjabeesse. Kitaabni sunis yeroo lammaffaaf maxxanfamtee gabaarra dhumte. Lalisaanis rakkoofi harihannaa mootummaan sababa Afaan Oromoon barreessuusaa qofaaf irraan geeseen utuu amileesaa hin laafisin.Qabsoo eegale kana xumuruuf barnoota malee akka hin dandaamne amanuun deggersa waaqaafi barsiisota inaaffaan dhugaa keessasaanii jiruun waggaa tokko booda barnootaatti deebihuun yeroo ammaa kana irra deebihee kutaa 12ffaa barachaa jira. Akkasumas kitaaba fuulduratti gabaarra oolan heeddu of harkaa qaba. ….
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa123SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← NABAASI BIRMADUU
SAPHAALOO KADIR EENYU? →
3 thoughts on “LALISAAN EENYUU?”	MURTIIKOOTApril 11, 2016 at 7:39 pmPermalink	Seenaa dhugaadha! Lalisaan hiriyaakoo nuti ijoollummaa waliin dhamdhamannee guddannedha! guddina har’a irra jiru kanarra ga’uun isaas hedduu na boonsa! Beekan atis goota galmeen seenaa hin daganneef sammuu sabaa keessaa yoomuu hin bannedha! seenaa ati hojjetaa jirtu nu boonsa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply	lalisaa qananiiMay 8, 2016 at 5:13 pmPermalink	sabboonaa ko jabaadhu guyyaan ifa itti baanu nii dhufaati?
Reply	AnonymousDecember 15, 2016 at 8:20 amPermalink	guddaa galatoomi. dhaloonni ammaa kun wal qabanee afaan keenyaa addunyaa irratti beeksisuu qabna.